Google services iri kuvharira mamwe maLinux web browser | Linux Vakapindwa muropa
Google services iri kuvharira mamwe mawebhusaiti eLinux
Vazhinji vashandisi veApple vanogona kurarama zvakaringana neCupertino masevhisi, asi isu vamwe tinofanirwa kuvimba nemamwe makambani kubata data redu, pamwe nekushandisa iro gore. Muchokwadi, pakati pevashandisi veApple kune zvakare vakawanda vanofarira iyo google services, izvo zvinoita kuti zvive pachena kuti kambani yekutsvaga injini inogara iri imwe yesarudzo dzakanakisa (kune avo vasina hanya nezve zvakavanzika). Dambudziko, uye ichi ichokwadi kune chero kambani, ndeyekuti masevhisi anogona kumira kushanda chero nguva.
Ndo izvo zviri kuitika izvozvi neGoogle masevhisi kana isu tichiedza kuwana ivo nemamwe maLinux mabhurawuza. Izvi zvataurwa mukati Reddit, kwavanotsanangura izvozvo haikwanise kuwana masevhisi aya kubva kuLinux mabhurawuza seKonqueror, Falkon (zvese kubva KDE) kana qutebrowser, iyo yekupedzisira inowanikwawo paWindows uye macOS. Dambudziko riripo, asi parizvino pakange pasina chirevo chepamutemo kubva kukambani inotungamirwa naSundar Photayi.
Haikwanise kuwana masevhisi eGoogle? Shandisa imwe browser
Meseji inoonekwa kana uchiedza kuwana kubva kubhurawuza risingatsigirwe parizvino inoti:
Kupinda kwakundikana. Bhurawuza iri kana chishandiso zvinogona kunge zvisina kuchengetedzeka. Edza kushandisa imwe bhurawuza. Kana iwe urikutoshandisa bhurawuza rakatsigirwa, unogona kuzorodza skrini rako uye edza kupinda zvakare.
Kunyange zvakadaro hapana chirevo chepamutemo, Google ine peji rewebhu kwatinogona kuona kana webhusaiti yedu ichienderana, yatinokwanisa kuwana kubva pano. Dambudziko nderekuti mabhurawuza asingakwanise kupinda nhasi anogona kuzviita mazuva mashoma apfuura, saka zvingangoita kuti ruzivo rwatiri kutsvaga haruwanikwe mune iyi yekubatanidza yapfuura.
Chinoshamisa pane zvese ndechekuti Kune vashandisi vanoti ivo vanogona kupinda kuGoogle services nebrowser imwe chete, saka hapana anoziva zviri kuitika. Kana vasiri vese vashandisi veiyo imwechete software vanogona kupinda, tinogona kufunga kuti ichi chibvumirano senge icho chinotitadzisa kupinda Gmail kubva kune vamwe vatengi vetsamba.
Panguva ino, avo vanokanganiswa vane sarudzo imwe chete: shandisa imwe browser. Kumirira chirevo chepamutemo kana mhinduro, tinokurudzira kushandisa Firefox.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google services iri kuvharira mamwe mawebhusaiti eLinux
Ndinovimba vanozvigadzirisa uye hakusi kutora makwikwi kunyangwe angave madiki sei